Daawo muuqaalka: Caleemo saarkii madaxweynaha Jubaland Col, Barre Hiiraale ee ka dhacaday magaalada Kismaayo |
Daawo muuqaalka: Caleemo saarkii madaxweynaha Jubaland Col, Barre Hiiraale ee ka dhacaday magaalada Kismaayo
Col, Barre Aden Shire Hiiraale oo ah madaxweynihii labaad ee Kismaayo uga dhawaaqay inuu Madaxweyne loogu doortay maamulka Jubaland xilli la shaaciyey in shirkii ka socday Jaamacada Kismaayo lagu doortay Axmed Maxamed Islaan ” Axmed Madoobe” ayaa maanta waxaa loo sameeyey Barre caleemo saar lagu sii adgeynayey is magacaabistiisa.
Col, Barre Hiiraale oo Kismaayo ku sugnaa muddooyinkii ugu danbeeyey ayaa mar kaliya shalay la soo baxay ku dhawaaqista inuu madaxweyne yahay, waxaana taasi ay wax ka badeshay xiisadii horey uga jirtay magaaladaasi. Waxaana sidoo kale ay dhaawac xoogan ku noqotay nidaamkii maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka iyo Gedo kuwaasi oo iminka u muuqda fowdo hor leh inay u curatay.
Dadka siyaasada qiimeeya ayaa doorashada Barre Hiiraale iyo Axmed Madoobe ku tilmaamay rag sameynaya dhoolatus cadaawad siyaasadeed oo muddo u dhexeeysay taasi oo kasoo bilaabatay xilligii Barre uu hogaaminayey Dooxada Juba, halka uu Axmed Madoobe isagana uu hogaaminayey maxaakiimtii xooga uga saartay Barre Kismaayo.
Caleemo saarka Barre ayaa waxaa yimid taageerayaashiisa. Waxaana halkaasi ay ku muujiyeen sida ay uga dhabtahay inuu Barre Hiiraale uu yahay Madaxweynaha Jubaland. Waxaana ay caleema saarkan timid kadib markii madaxweynihii sadexaad isagana isla magaalada Kismaayo dhinac ka mid ah uu uga dhawaaqay inuu Madaxweyne yahay.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL LAGA SOO DUUBAY XAFLADAASI BARRE HIIRALE: